Play Files na TV
2 Play MKV on LG TV
3 Play MKV on Samsung TV
5 Play MKV on Sony TV
7 Play MOV on TV
Apụghị-ele AVI faịlụ gị TV site na eriri? Na-eme na dị ka nkịtị, ọ bụghị naanị gị! Otu AVI faịlụ bụ a nnọọ mgbagwoju anya format na ike ga-koodu n'ụzọ dị iche iche na gị TV dị nnọọ agaghị-enwe ike ịmata ha nile. Ọfọn, ọ bụ ike iji chọta ezi codecs na wụnye ha ya. Ya mere, ọ dị mma ịnwale mfe na quicker ụzọ; encode ha ka ha ihe ọ bụla format gị mkpa dị nnọọ 3 mfe nzọụkwụ. E nwere ihe a zuru ezu nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu n'okpuru.
Niile ị chọrọ bụ a siri ike ma dị ike Video Ntụgharị (Video Converter Ultimate for Mac). Ị nwere ike ibudata free ikpe ebe a:
Alternatively, ọ bụrụ na ị nwere gụgharia ngwaọrụ dị ka Chromecast, Roku, Apple TV, Xbox ma ọ bụ PS3, ma ọ bụ gị TV bụ a smart TV, i nwere ike iji Wondershare Video Ntụgharị iji strimụ AVI faịlụ ka TV (Samsung TV gụnyere), n'agbanyeghị ihe codecs bụ n'ime AVI faịlụ. Ọ pụtara na ị na-adịghị mkpa na-egwu AVI faịlụ na TV site USB. Rịba ama na a ngwọta bụ nanị kwesịrị ekwesị maka Windows n'elu ikpo okwu.
Dịkwa mma ka mbụ ahụ otú iji tọghata AVI ka TV dakọtara format ọ bụrụ na ị ka na-eji eriri ụzọ. Mgbe ahụ, anyị ga-agwa gị otú ị pụrụ enuba ọ bụla AVI faịlụ ka TV (Samsung TV gụnyere) na dị nnọọ a click.
Nkebi nke 1: Easy Nzọụkwụ iji tọghata AVI ka TV dakọtara format
Nkebi nke 2: Stream AVI faịlụ ka TV (Samsung TV gụnyere)
1 Ibu Ibu AVI faịlụ ka AVI ka TV Ntụgharị
Ẹkedori a usoro, pịa Add Files bọtịnụ ma ọ bụ ịdọrọ gị AVI faịlụ ozugbo na na interface. (Atụmatụ: ogbe akakabarede na-akwado iji mee ka gị akakabarede na-azọpụta oge).
Mgbe importing na AVI faịlụ, ị nwere ike nyegharịa faịlụ, re-ndokwa dị faịlụ na nwekwara ike pịa jikota niile videos n'ime otu faịlụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
2 Họrọ otu kwesịrị ekwesị usoro maka gị TV
Pịa mmepụta Format ịhọrọ gị chọrọ usoro. Ebe a, ị ga-ahụ tọn videos, audios na ndị ọzọ na preset formats dị. Ọ na-atụ aro ka abụọ-ego ndakọrịta ma ọ bụ na-akwado formats na gị TV mbụ, dị ka nke a pụrụ ịdị iche iche dị ka ika na ụdị. Otú ọ dị, MPEG-2, VOB na Dvix faịlụ Ọkpụkpọ na-adịkarị akwado gafee dị iche iche TV tent.
3 Malite AVI ka TV akakabarede
Ugbu a ị na-abịa ikpeazụ nzọụkwụ, dị nnọọ kụrụ tọghata ka mgbachapụ AVI ka TV akakabarede. Ozugbo ọ converted, ị nwere ike ugbu nyefee faịlụ gị ike mbanye ma kpọọ ya azụ gị LCD site a HDMI ma ọ bụ eriri USB.
Play AVI on TV Atụmatụ:
Ọ bụrụ na gị mbụ faịlụ bụ HD àgwà, ị nwekwara ike ịhọrọ HD MPEG ma ọ bụ TS usoro. I nwekwara ike ịgbanwe ndị parameters na-kpọmkwem otu dị ka gị isi iyi faịlụ iji hụ nke kacha mma mma playback. Ka ịnweta ọnọdụ window, dị nnọọ pịa Ntọala button nri n'elu tọghata bọtịnụ. Ọzọkwa, ị nwekwara ike họrọ mmepụta format dị ka 3D MOV, 3D WMV ma ọ bụ 3D MP4 na 3D format Atiya bụrụ na ị chọrọ.
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-ekiri vidio na TV na n'ụlọ DVD ọkpụkpọ ekirikarị elu, ị nwere ike ọkụ gị AVI faịlụ jidesie a DVD diski na nke a Video Ntụgharị kwa.
Free download nke AVI ka TV Ntụgharị:
Rịba ama na otú a bụ naanị apụtakarị na Windows n'elu ikpo okwu na Wondershare Video Ntụgharị ma hụ na ị nwetara a gụgharia na ngwaọrụ dị Chromecast, Roku ma ọ bụ na ị nwere smart TV. Na otú a, ị na-adịghị mkpa ka nchegbu banyere ihe codecs bụ n'ime ndị AVI faịlụ na Olee otú iji tọghata ha. Ọ nwere ike na-akwado ihe ọ bụla ọzọ formats na i nwere ike na-eche dị ka MKV, MOV, MP4, WMV, VOB, RMVB na ọtụtụ ndị ọzọ.
1 Ina ejikọrọ
Mbụ ị ga-mkpa jikọọ gị PC gị na TV ma ọ bụ nkwanye na ngwaọrụ dị Chromecast na otu netwọk. Na mgbe ị rụnyere Wondershare Video Ntụgharị, ya plugin --_ 1_698_1_ Media Server nwekwara ike arụnyere na i nwere ike ịhụ ya shortcut na gị na desktọọpụ. Ugboro abụọ pịa shortcut na akara ngosi na-emeghe Wondershare Media Server. Mgbe ahọrọ mata nkwanye ngwaọrụ na ala.
2 Tinye AVI faịlụ ka Media Server
Pịa Import na Disk iṅomi na-esi gị AVI faịlụ ka Media Server. Ọzọkwa ị pụrụ ịnyagharịa gị na kọmputa na-ahụ faịlụ site na Computer nhọrọ na plugin.
3 Stream AVI ka TV (Samsung TV gụnyere)
Òké n'elu na otu faịlụ ma pịa na Play on TV button na ga-apụta. Mgbe ahụ ị pụrụ inweta AVI faịlụ gị TV mfe.
Lelee ya ugbu a.
Olee otú iji tọghata AVI ka DVD na Mac / Windows (Windows 10 gụnyere)
> Resource> Video> Olee otú iji Play AVI Files na TV (Samsung TV gụnyere)